ဗစ်​တိုးရီးယား အမှု တကယ်​ ပြီးဆုံးသွား ပြီလား? – GuGuGarGar
ရေး သား သူ – သက္က မိုးညို
ဗစ် တိုးရီးယား အမှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာလာမေးကြတယ် ။ အမှုက ပြီးသွားပြီဆို…၊ ဘာမှ လုပ်မရဘူးလား ၊ ဒီအတိုင်းပဲ ပြီးသွားတာလား ။ ငြိမ်နေတယ်နော်၊ ဘာညာ ဘာညာ ၊ တချို့က အားမလို အားမရစိတ်နဲ့ မေးတာ ဖြစ်သလို၊ တချို့ကျ ( ဒီကောင်တွေ ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ ) ဆိုတာမျိုး ဆွချင်တဲ့ အခံ နဲ့ မေးတာတွေ ရှိတယ် ။ ဒီဘက်က တမင်ငြိမ်နေတာ ကို နားမလည် ပါးမလည် လာလာမေးကြသူတွေ ရှိတယ် ။ ထား ပါတော့…
(၁) ဗစ် တိုးရီးယား အမှုလို့ ပြောရင် ကျွန်တော်တို့ ခံယူတာက (သမီးလေး အမှန်တရား ရရေး လှုပ်ရှားမှု) ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ပြောတာ။ အောင်ကြီးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က အောင်ကြီးကို တရားရှင် လွှတ်လိုက်ခြင်းနဲ့အတူ ရုံးချိန်းတွေ ရပ်သွားပြီ။ ဒါပေမယ့် ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ပြင်ဆင်ချက်နဲ့ တက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့အတွက် ရက်ပေါင်း ၆၀ ပြည့်မယ့် ၁၈.၂.၂၀၂၀ အထိ စောင့်ရမယ်။ စောင့်ရမယ့် ကိစ္စကို စောင့်တာက အောင်ကြီးအမှု ပြီးမပြီး စောင့်တာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဗစ်တိုးရီးယား အမှန်တရား ရရေး ရှာဖွေမှု ရပ်တန့်သွားတာ မဟုတ်ပါ။
(၂) ဘာ ဆက်လုပ်မှာလဲ ဆိုတော့ …. အင်း၊ မပြောဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်ဦးမလဲ မသိလို့။ ၀ယ်လင်တန်ကိုလား မသိဘူး။ စစ်ပွဲကို ဘယ်လိုတိုက်မှာလဲ လာမေးတယ်။ ဟင်… စစ်ပွဲက ငါက စတာမဟုတ်ဘူးကွ။ နပိုလီယန် စတာ။ ဒီတော့ သူက မြောက်ဘက်က တိုက်ရင် ငါက တောင်ဘက်က ခုခံရမှာ။ သူက တောင်ဘက်က တိုက်ရင် ငါက မြောက်ဘက်က ခုခံရမှာ..တဲ့။ (မှားရင် ပြင်ပေးပါ။ သဘောတရားလေးပဲ ယူတာ) ဒီတော့ ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်မယ်မှန်း မသိပဲ ဆင်ဖမ်းမယ် ကျားဖမ်းမယ် အော်နေလို့ မရပါဘူး။ တခုပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ရပ်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စောင့်နေတာပါ။
(၃) အ မှန်တရားက ဘာလဲဆိုတာ ဘွားဘွားကြီး မမြင်ရရင်တောင် ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို လိမ်လည်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို အားလုံးသိအောင် ချပြနိုင်ခဲ့တာပဲ။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ရှောင်သွားတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့ ပြောစရာမလိုပဲ မြင်ကြမှာပါ။ ဟိုဟာ မပြင်ရသေးလို့၊ ဟိုဟာက ဟိုအောက်မှာ မရှိလို့ လို့ လာပြောကြသူတွေလည်း စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ အစကတည်းက ပြည်သူကိုပဲ အားကိုးခဲ့တာပါ။
(၄) သ မီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် အမှန်တရား ရှာဖွေရေးသည် မပြီးပြတ်သေးဘူး ဆိုတာပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရပ်တန့်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာလည်း ပြောချင်ပါတယ်။
ရေး သား သူ – သက်ကမိုးညို
ဗဈတိုးရီးယား အမှု နဲ့ ပတျသကျပွီး လာလာမေးကွတယျ ။ အမှုက ပွီးသှားပွီဆို…၊ ဘာမှ လုပျမရဘူးလား ၊ ဒီအတိုငျးပဲ ပွီးသှားတာလား ။ ငွိမျနတေယျနျော၊ ဘာညာ ဘာညာ ၊တခြို့က အားမလို အားမရစိတျနဲ့ မေးတာ ဖွဈသလို၊ တခြို့ကြ (ဒီကောငျတှေ ဘာဆကျလုပျမှာလဲ) ဆိုတာမြိုးဆှခငျြတဲ့ အခံနဲ့ မေးတာတှေ ရှိတယျ။ ဒီဘကျက တမငျငွိမျနတောကို နားမလညျ ပါးမလညျ လာလာမေးကွသူတှေ ရှိတယျ။ ထားပါတော့…
(၁) ဗဈတိုးရီးယား အမှုလို့ ပွောရငျ ကြှနျတျောတို့ ခံယူတာက (သမီးလေး အမှနျတရား ရရေး လှုပျရှားမှု) ကိုပဲ ကြှနျတျောတို့ ပွောတာ။ အောငျကွီးကို ရဲတပျဖှဲ့က စှဲဆိုထားတဲ့ အမှုသညျ ဒီဇငျဘာ ၁၈ ရကျနကေ့ အောငျကွီးကို တရားရှငျ လှတျလိုကျခွငျးနဲ့အတူ ရုံးခြိနျးတှေ ရပျသှားပွီ။ ဒါပမေယျ့ ရကျပေါငျး ၆၀ အတှငျး ပွငျဆငျခကျြနဲ့ တကျနိုငျတယျ ဆိုတဲ့အတှကျ ရကျပေါငျး ၆၀ ပွညျ့မယျ့ ၁၈.၂.၂၀၂၀ အထိ စောငျ့ရမယျ။ စောငျ့ရမယျ့ ကိစ်စကို စောငျ့တာက အောငျကွီးအမှု ပွီးမပွီး စောငျ့တာပဲ ဖွဈတယျ။ ဗဈတိုးရီးယား အမှနျတရား ရရေး ရှာဖှမှေု ရပျတနျ့သှားတာ မဟုတျပါ။
(၂) ဘာဆကျလုပျမှာလဲ ဆိုတော့ …. အငျး၊ မပွောဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယျသူတှေ ဘာလုပျဦးမလဲ မသိလို့။ ဝယျလငျတနျကိုလား မသိဘူး။ စဈပှဲကို ဘယျလိုတိုကျမှာလဲ လာမေးတယျ။ ဟငျ… စဈပှဲက ငါက စတာမဟုတျဘူးကှ။ နပိုလီယနျ စတာ။ ဒီတော့ သူက မွောကျဘကျက တိုကျရငျ ငါက တောငျဘကျက ခုခံရမှာ။ သူက တောငျဘကျက တိုကျရငျ ငါက မွောကျဘကျက ခုခံရမှာ..တဲ့။ (မှားရငျ ပွငျပေးပါ။ သဘောတရားလေးပဲ ယူတာ) ဒီတော့ ဘယျသူတှေ ဘာလုပျမယျမှနျး မသိပဲ ဆငျဖမျးမယျ ကြားဖမျးမယျ အျောနလေို့ မရပါဘူး။ တခုပဲ။ ကြှနျတျောတို့ ရပျသှားတာ မဟုတျပါဘူး။ စောငျ့နတောပါ။
(၃) အမှနျတရားက ဘာလဲဆိုတာ ဘှားဘှားကွီး မမွငျရရငျတောငျ ဘယျသူတှေ ဘယျလို လိမျလညျခဲ့တယျ ဆိုတာကို အားလုံးသိအောငျ ခပြွနိုငျခဲ့တာပဲ။ ဘယျသူတှေ ဘယျလို ရှောငျသှားတယျဆိုတာလညျး ကြှနျတျောတို့ ပွောစရာမလိုပဲ မွငျကွမှာပါ။ ဟိုဟာ မပွငျရသေးလို့၊ ဟိုဟာက ဟိုအောကျမှာ မရှိလို့ လို့ လာပွောကွသူတှလေညျး စိတျမဝငျစားပါဘူး။ အစကတညျးက ပွညျသူကိုပဲ အားကိုးခဲ့တာပါ။
(၄) သမီးလေး ဗဈတိုးရီးယားအတှကျ အမှနျတရား ရှာဖှရေေးသညျ မပွီးပွတျသေးဘူး ဆိုတာပဲ ပွောခငျြပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ရပျတနျ့မှာ မဟုတျဘူး ဆိုတာလညျး ပွောခငျြပါတယျ။
Previous post အရေးပေါ် ငလျင် သတိပေး ချက် အားလုံး သိအောင် ရှယ်ပေး ပါဗျ
Next post ဆင်ဖြူကျောင်း ဆရာတော်ကြီး လိုက်ပါလာသော ကားကို ဆိုင်ကယ် ၆ စီးပါ လူငယ်အဖွဲ့က ခဲဖြင့်ပစ်ပေါက်